डा. सुनिल शर्माको प्रवेशसँगै काठमाडौं मेडिकल कलेजमा ओपीडी निःशुल्क – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/डा. सुनिल शर्माको प्रवेशसँगै काठमाडौं मेडिकल कलेजमा ओपीडी निःशुल्क
काठमाडौं । काठमाडौंको सिनामंगल स्थित काठमाडौं मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालले ओपीडी निःशुल्क गरेको छ । यसअघि प्रति बिरामी १ सय रुपैयाँ ओपीडी शुल्क लिँदै आएको अस्पतालले बिहीबारबाट लागू हुनेगरी ओपीडी निःशुल्क गरेको हो ।
बिराटनगरस्थित नोबेल शिक्षण अस्पतालका सञ्चालक समेत रहेका डा.सुनिल शर्माले नेपालकै उत्कृष्ट मानिने काठमाडौं मेडिकल कलेजको अध्यक्षको जिम्मेवारी सोमबारबाट सम्हालेका छन् । डा.शर्माको प्रवेश लगत्तै अस्पतालले बहिरंग सेवा वापतको स्वास्थ्य परिक्षण शुल्क हटाउने निर्णय लिएको हो । बिरामीहरुलाई उपचारमा सहुलियत प्रदान गर्न ओपीडी निःशुल्क गरिएको अस्पताल अध्यक्ष डा.शर्माले जानकारी दिए ।
काठमाडौंको सिनामंगल र भक्तपुरको दुवाकोटबाट कलेजको अस्पताल सेवा सञ्चालन भईरहेकाले दुबैमा ओपीडी निःशुल्क हुनेछ । सशुल्क उपचार सेवाको दररेट भने पुरानै कायम छ । सामान्य अवस्थामा सो अस्पतालमा उपचारका लागि दैनिक करिब १ हजार २ सय बिरामी आउने गरेका छन् । कोरोनाका कारण अहिले भने दैनिक करिब २ सय बिरामीको उपचार हुँदै आएको अस्पतालले जनाएको छ ।
सांसदहरूलाई पीडितको आग्रह – एसिड आक्रमण गर्ने अपराधीलाई जन्मकैदको कानून बनाइदिनुस्
भर्खरै एक पापी श्रीमानले आफ्नी श्रीमतीलाई ढङ्गले हानेर हत्या